The Gardener: စာအုပ်များနှင့်ကျွန်တော်
post ကိုတင်လိုက်တာနဲ့ ချစ်သူငယ်ချင်းတွေရဲ့ မေတ္တာပို့မှုကိုခံယူလိုက်ရတယ်။ သူတို့ပြောတာာကတော့ ပို့စ်ရဲ့ထိပ်ဆုံးမှာ ပျင်းစရာ ဘယ်လောက်ကောင်းနိုင်လဲဆိုတာကို stars လေးတွေနဲ့ပြစမ်းပါတဲ့။ အဲဒါပေါ်မူတည်ပြီး ဘယ်နေ့လောက်၊ ဘယ်အချိန်လောက် ဖတ်သင့်လဲစဉ်းစားလို့ရတာပေါ့တဲ့။ အဲဒါနဲ့ပဲ ဒီအပိုင်းလေးကို ဖြည့်စွက်ပြီးထပ်တင်လိုက်ရပါတယ်။
Length : 4.5 pages (font 11, Zawgyi-One, Letter page size)
Humour :0%
Who should read this post? : No one unless she/he(no one) has got so much free time to think.
Label : monday ကျက်သရေ
Ref : Nothing
Boredom Rating :9* (out of 9)
မေလတုန်းက အိမ်ပြောင်းတာနဲ့ စာအုပ်တွေကို စုသိမ်းထားလိုက်တယ်။ ဒီနေ့အားနေတာနဲ့ Murakami ဖတ်ဖို့ ၀ယ်ထားတဲ့ Kafa on the Shore ဆိုတဲ့တစ်အုပ်ကိုပြန်ရှာတာ အတော်လေးရှာလိုက်ရတယ်။ ရှာချင်တဲ့စာအုပ်ကိုမတွေ့ခင်တွေ့တဲ့စာအုပ်တွေကို မြည်းနေတာနဲ့ တော်တော်လေးအချိန်ကြာသွားတယ်။ တစ်ချို့စာအုပ်တွေကို ဆယ်တန်းဖြေပြီးလို့နောက်တစ်နှစ် (၂၀၀၀ ပြည့်နှစ်)လောက်မှာဝယ်ဖြစ်တယ်။ တံဆိပ်ခေါင်းစုတာ ၀ါသနာပါတဲ့သူတွေ တံဆိပ်ခေါင်းကိုတွေ့ရင် ရသမြောက်နေသလိုမျိုး၊ စာအုပ်ဝယ်သိမ်းတာဝါသနာပါတဲ့သူတွေဟာလည်း စာအုပ်လေးတစ်အုပ်ကိုကိုင်လိုက်တာနဲ့ အဲဒီစာအုပ်ရဲ့အကြောင်း၊ကိုယ့်ဘ၀အကြောင်း အားလုံးပြန်တွေးဖြစ်တယ်။
စာအုပ်တွေနဲ့ ကျွန်တော်ရဲ့ ဆက်နွယ်မှုက သိပ်ရင်းနှီးတဲ့သူငယ်ချင်းတွေလိုပဲ။ သူတို့ကို ကျွန်တော် သိပ်ချစ်တယ်။ စိတ်ဆင်းရဲတဲ့အချိန်တွေမှာ စာအုပ်လေးတစ်အုပ်ကလွဲရင် ဘယ်သူမှရှိမနေစေချင်တဲ့ နေ့ရက်တွေမှာ စာအုပ်တွေဟာ သစ္စာရှိရှိ အတူရှိနေခဲ့ကြတယ်။ အရင်က စာအတူတူဖတ်ကြတဲ့ သူငယ်ချင်းတွေကိုလည်း စာအုပ်ကောင်းလေးတွေ ဖတ်ရတိုင်း သတိရတယ်။ သူတို့တွေရော ဘာတွေ ဆက်လုပ်နေလဲ။ ဘာတွေဆက်စိတ်ဝင်စားနေလဲဆိုတာမျိုးပေါ့။ စာအုပ်တွေဟာ သမိုင်းအစဉ်အဆက် လက်ဆင့်ကမ်းလာတဲ့ တန်ဖိုးကြီးအမွေအနှစ်တွေပါပဲ။ စာအုပ်တွေကို လက်ဆင့်မကမ်းနိုင်ခဲ့ရင် အတိတ်မှာလေ့လာခဲ့သမျှဟာ ပျောက်ပျက်သွားမှာပါပဲ။
စာအုပ်တွေကို ချစ်တဲ့အတွက် စာဖတ်ဝါသနာပါတဲ့ ကလေးတွေကိုလည်း ချစ်တယ်။ သူတို့တွေကို အများကြီး ကူညီချင်တယ်။ ကျွန်တော့်ငယ်ဘ၀တုန်းက ဖတ်ချင်ရက်နဲ့ဝယ်မဖတ်နိုင်လို့ နှစ်နဲ့ချီစောင့်ပြီး ဖတ်ခဲ့ရတဲ့စာအုပ်တွေကို သူတို့အလွယ်တကူဖတ်ခွင့်ရစေချင်တယ်။ စာကြည့်တိုက်တွေမှာ စိတ်ရှည်လက်ရှည်သွားပြီးဖတ်တဲ့ အလေ့အထမျိုးတွေ ရှိစေချင်တယ်။ ကိုယ့်တုန်းက မရခဲ့တဲ့ လစ်ဟာမှုတွေကို ကလေးတွေ အားလုံးရစေချင်တယ်။ ဖြစ်နိုင်ရင် မြန်မာပြည်က ကျောင်းတွေမှာ ကလေးတစ်ယောက်ကို i-pad တစ်ခု၊ Laptop တစ်လုံး ရနိုင်စေချင်တယ်။ သူတို့ရဲ့ လေ့လာမှုရင်းမြစ်ကို ပြည့်ဝစေချင်တယ်။ ဒီလိုပြောရင် စိတ်ကူးယဉ်တယ်လို့ပဲ ထင်ကြတဲ့သူများတယ်။ ကလေးတွေကို စာပေနဲ့ပတ်သက်ရင် ကန့်သတ်တာမကောင်းဘူး။ မင်းငယ်သေးတယ် ဒါတွေဖတ်ရင် နားလည်ဦးမှာမဟုတ်ဘူးဆိုတာတွေကို ဥာဏ်နည်းတဲ့သူတွေပြောလေ့ရှိတယ်။ ကလေးတွေထဲမှာ လူကြီးတွေလောက် နားလည်တဲ့သူတွေ ရှိနေမှာပဲ။ သူတို့တွေ ပေါက်မြောက်သွားဖို့ဆိုတာ မိသားစုနဲ့ဆရာတွေနဲ့အများကြီးသက်ဆိုင်တယ်။
စာအုပ်အကြောင်းပြောရင်း ကလေးတွေအကြောင်း ရောက်သွားတယ်။(လိုင်းနည်းနည်းပြန်တည့်လိုက်မှ) ငယ်တုန်းက ကျောင်းစာကြည့်တိုက်မှာ စာသွားဖတ်ကြတယ်။ ကျွှန်တော်တို့သူငယ်ချင်းသုံးယောက် အဲဒီစာကြည့်တိုက်မှာ အချိန်အားတိုင်းရှိခဲ့တယ်။ စာကြည့်တိုက်ကလေးက သေးသေးလေးပါပဲ။ စာအုပ်တွေစာရင်းသွင်းတာတို့ မျိုးတူပြုတာတို့တွေကို ရှစ်တန်းလောက်မှာ လုပ်ကြတယ်။ ကိုယ်နားလည်သလောက် ကိုယ်လုပ်ကြတာပါ။ အဲဒီစာကြည့်တိုက် သန့်ရှင်းရေးကို volunteer လုပ်ပြီး စနေနေ့မျိုးလည်းသွားကြတယ်။ စာအုပ်တွေကို မငှားရက်ဘဲ ပိတ်သိမ်းထားတဲ့စာကြည့်တိုက်လေးကိုကြည့်ရင်း အလှောင်ခံထားရတဲ့ ပညာရှိလေးတစ်ယောက်လိုပဲလို့ တွေးမိတယ်။ (ငှားလိုက်ရင်ကြတော့ ပြန်မအပ်ဘဲပျောက်ကုန်လို့လို့ ဆရာမကပြောတယ်။ ဆရာအော်ပီကျယ်ပြောတဲ့စကားလို စာကြည့်တိုက်လုပ်တဲ့သူတွေက စာအုပ်အပျောက်ခံနိုင်ရမယ်။ စာအုပ်အပျက်အစီးခံနိုင်ရမယ် ဆိုတာမျိုး ဆရာမခမျာ မသိရှာတာလည်းပါမယ်။ သူတို့သိတာက မငှားရင်မပျောက်ဘူး)
စာအုပ်တွေကို လှူဖို့ကိစ္စကိုလည်း အတော်လေးစဉ်းစားဖြစ်တယ်။ ကျွန်တော့်အသိတွေထဲမှာ စာကြည့်တိုက်ထောင်တဲ့သူတွေရှိတယ်။ အပျော်တမ်းစာကြည့်တိုက်တွေ လုပ်ကတည်းက စာအုပ်တွေပျောက်တာကိုညည်းတယ်။ မြန်မာလူမျိုးတွေက စည်းကမ်းကိုဆို စကတည်းက လျော့လျော့ပေါ့ပေါ့လောက်လုပ်တယ်။ မွေးကတည်းက စည်းနဲ့ကမ်းနဲ့နေတဲ့သူရှားတယ်။ မိဘက နေခိုင်းလို့သာနေရတာများတယ်။ အဲဒီလိုလူတွေဟာ စည်းကမ်းကို မလိုက်နာလည်း ဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့ အသိကြီးရှိနေတတ်တယ်။ လစ်ရင်လစ်သလို စည်းကမ်းမဲ့တတ်တယ်။ စည်းကမ်းဆိုတာကို သူများချမှတ်ပေးတာ လိုက်နာတဲ့သူမျိုးနဲ့ ကိုယ့်စည်းကမ်း ကိုယ်ပြဌာန်းတဲ့သူမျိုးတွေဟာ တူကိုမတူဘူး။ ကြီးလာမှသင်ရင် အဲဒီ စည်းကမ်းတွေကို တကယ်စိတ်ထဲမှာမသိတော့ဘူး။ ကလေးတွေကို စနစ်ကျတဲ့စာကြည့်တိုက်ကို ငယ်တုန်းက ခေါ်သွားလိုက်။ ပြီးရင် တစ်ခါတည်း စာအုပ်ကို ဘယ်လိုကိုင်တွယ်ရမယ်။ စာကြည့်တိုက်ကစာအုပ်ကိုမခေါက်ရဘူး။ စာကြည့်တိုက်ထဲမှာ စကားမများရဘူး။ ငှားလာတဲ့စာအုပ်တွေကို ရိုသေရမယ်။ တခြားသူတွေပြန်ငှားလို့ရအောင် အချိန်မီပြန်အပ်ရမယ်ဆိုတာမျိုးတွေ သင်ထားလိုက်ရင် ကလေးတွေငယ်ကတည်းက စာအုပ်တွေအပေါ် ခင်တွယ်ပြီး အကိုင်အတွယ်သပ်ရပ်တဲ့သူတွေ၊ စည်းစနစ်နဲ့စာဖတ်/မှတ်တဲ့သူတွေဖြစ်လာနိုင်တယ်။
ကျွန်တော်ကတော့ စာအုပ်တွေကို လှူရင် တကယ်ဖတ်တဲ့လူရှိမလားဆိုတာကို အရင်ဆုံးမေးတယ်။ မိတ်ဆွေတွေက မွန်ပြည်နယ်၊ ဘီလူးကျွန်းဘက်မှာ စာကြည့်တိုက်လုပ်ကြတယ်။ ငယ်ကတည်းက၀ယ်လာတဲ့ English စာစောင်တွေ၊ magazine တွေကို ဆာလာအိတ် နှစ်အိတ်လောက်နဲ့ လှူလိုက်တယ်။ အဲဒီဒေသက ကလေးတွေကို လူတောာ်လေးတွေ ဖြစ်စေချင်တယ်။ စာကြည့်တိုက်ကောင်းကောင်း ရှိတဲ့နေရာတွေက လူတွေဟာ အခြေခံဗဟုသုတ ကျေညက်ကြတယ်။ နောက်လည်း အဲဒီစာကြည့်တိုက်ကို ကလေးတွေဖတ်ဖို့ လိုတာတွေ လှူဖြစ်တယ်။ မိတ်ဆွေတွေက အဲဒီမှာ စာပေဟောပြောပွဲလုပ်တယ်။ ဆရာအော်ပီကျယ်တို့၊ ဆရာအောင်ဝေး တို့သွားပြီးဟောပြောကြတယ်။ (နောက်တစ်ယောက်ကို ကျွန်တော်နာမည်မေ့နေတယ်။ သူက ဒီဘိုနိုးစာအုပ်တွေ ဘာသာပြန်တယ်။ နာမည်ကြီးတော့မဟုတ်ဘူး။ လူတော်တစ်ယောက်ပဲ ။ သူလည်းဟောပြောဖို့လိုက်တယ်။ မဂျူးကိုလည်းဖိတ်သေးတယ်။ ဘာကြောင့်လဲတော့မမှတ်မိဘူး။ မလိုက်ဖြစ်လိုက်ဘူးဖြစ်သွားတယ်။) ၀မ်းသာစရာကောင်းတာက အဲဒီ စာကြည့်တိုက်က အောင်မြင်တယ်။ သူတို့မှာ အဖွဲ့အစည်းနဲ့ဖြစ်လာတယ်။ စာဖတ်နှုန်းကောင်းလာတယ်။ စာကြည့်တိုက်ရံပုံငွေ ကောင်းလာပြီး ပြင်ပအကူအညီမပါဘဲ ရပ်တည်နိုင်လာတယ်။ အဲဒါကို ကျွန်တော် အင်မတန် ၀မ်းသာတယ်။ မတ်လက ပြန်တုန်းကလည်း မိတ်ဆွေတွေနဲ့တွေ့တော့ အဲဒီကိစ္စထပ်ပြောဖြစ်တယ်။
စာဖတ်တယ်ဆိုတာမှာ ကောင်းတာတွေကို အတုမယူနိုင်ရင် တန်ဖိုးမရှိပါဘူး။ အဲဒီလိုဆိုရင် များများသိတဲ့ ကပ်သီးကပ်သတ်လူပဲ ဖြစ်လာလိမ့်မယ်။ စာကြည့်တိုက် လုပ်ဖို့ကြိုးစားခဲ့တဲ့ မိတ်ဆွေတွေဆို ဆရာအောင်သင်းရဲ့ ရည်မှန်းချက်ဖြစ်တဲ့ ကျေးရွာတွေမှာ စာကြည့်တိုက် ရှိရေးကို ဖတ်ခဲ့ကြတာပဲ။ အမြော်အမြင်ရှိတဲ့ လူကြီးတစ်ယောက်လောက်ရှိရင်ကို နောင်လာနောင်သားတွေ အကျိုးများတာပဲလို့တွေးမိတယ်။ သိတဲ့လူတွေက များများပြောခဲ့ဖို့လိုတယ်။ တချိန်ကြရင် ဒါကို သဘောကျတဲ့လူငယ်တွေ ဆက်လုပ်သွားလိမ့်မယ်။ ရူပဗေဒမှာဆိုရင် သီအိုရီတွေ အများကြီးရှိတယ်။ လက်တွေ့ သက်သေပြဖို့ သချာင်္က တိုးတက်ဖို့လိုသေးလို့ စောင့်နေရတာတို့၊ တခြား နည်းပညာရပ်တွေက လိုက်မမီသေးလို့ သက်သေမပြနိုင်သေးတာတို့ရှိတာပဲ။ တခြားဟာတွေမရှိသေးလို့ သီအိုရီတွေ ကြိုရှာထားဖို့မလိုဘူးဆိုရင်တော့ အခုလို အဆင့်မြင့်နည်းပညာတွေ မြန်မြန်ဆန်ဆန်ပေါ်ပေါက်လာမှာမဟုတ်တော့ဘူး။ တကယ်သိတဲ့လူတွေကလည်း ဒီလို သီအိုရီထုတ်ခဲ့တဲ့ လူတွေလို နောက်လူတွေ သိစရာလိုပြီး အကျိုးများတာတွေကို စေတနာ မှန်မှန်နဲ့ များများပြောခဲ့ဖို့လိုတယ်။
နောက်ထပ် ကောင်းမွန်တဲ့အလေ့အထတစ်ခုက စာအုပ်တွေ ဈေးကြီးလို့မတတ်နိုင်ရင် ၀ါသနာပါပြီး စည်းကမ်းရှိရှိဖတ်တတ်တဲ့ သူတွေစုဖွဲ့ပြီး စာအုပ်စုဝယ်ပြီး ဖတ်ကြဖို့ပါပဲ။ စာအုပ်တွေက ဈေးကြီးတာမဟုတ်ဘူး တစ်ဦးချင်းဝင်ငွေက နည်းတာဆိုတာကိုလည်း လူငယ်တွေ တစ်နေ့သဘောပေါက်လာလိမ့်မယ်။ အင်္ဂလိပ်ကဗျာစာအုပ် အပါးလေးတစ်အုပ်ကှို15 SGD ပေးဖတ်ရတဲ့အချိန်မှာ မြန်မာပြည်မှာ စာအုပ်တစ်အုပ်ကို ၃၀၀၀ (<5 SGD) လောက်နဲ့ရနေတုန်းပါပဲ။ ကလေးတွေကို သိပ်ကိုတော်စေချင်ပါတယ်။ လူကြီးတွေတော်တာတွေကိုတော့ အခုအချိန်မှာ သိပ်များများသုံးစားလို့မရတော့ပါဘူး။ တကယ်တော်တဲ့သူတွေ အများစုကလည်း အိမ်ထဲမှာ အနံ့အသက်မကောင်းလို့ဆိုပြီး အပြင်တွေ ထွက်ကုန်ပြီ။ ကလေးတွေရဲ့ မိဘတွေကလည်း ကျောင်းစာကလွဲရင် တခြားစာတွေကို စာလို့ကိုမမြင်တာများနေတယ်။ ကျောင်းစာဆိုတာ ကျောင်းမှာပဲ သုံးလို့ရတဲ့စာမျိုး ဖြစ်နိုင်တယ်။ ကျောင်းရဲ့ပြင်ပမှာ ကလေးတွေရဲ့ ဘ၀အတွက် တကယ်လိုအပ်မယ့် အတွေးအခေါ်ပါတဲ့ စာပေမျိုးတွေ အများကြီးရှိသေးတယ်။ သူတို့ဘ၀မှာ ဘယ်လိုနေသွားမလဲဆိုတာကို သူတို့ဆုံးဖြတ်နိုင်အောင် ကူညီမယ့် သုတ၊ ရသ စာအုပ်ကောင်းတွေ အများကြီးရှိပါသေးတယ်။ (အချိန်ရတဲ့ အခါ ကလေးစာပေ ဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက်လည်း စာအုပ် စာရင်းတွေ ရေးပါဦးမယ်။ )
အခုတလော မြန်မာစာအုပ်တွေနဲ့ပတ်သက်ပြီး ရှင်သန်ဖို့ ဘယ်လိုလုပ်သင့်လဲဆိုတာတွေ အများကြီး တွေးဖြစ်ပါတယ်။
မြန်မာစာအုပ်တွေ ရေးတဲ့သူတွေမှာ ဘုန်းကြီးတွေ ရေးတဲ့ စာအုပ်တွေလောက် ရောင်းကောင်းတာ မရှိပါဘူး။ တကယ်ကို မရှိဘူး။ ဘာသာရေးစာပေက မြန်မာပြည်မှာ ရောင်းအကောင်းဆုံးဖြစ်နေတယ်။ ဘာသာရေးတောင်မှ ပါဠိမပါတာတွေက ပိုရောင်းကောင်းတယ်။ Target Audience ကလည်း မိသားစုတွေဆီတည့်တည့်ရောက်တယ်။ တခြားစာပေဆိုရင်တော့ မိသားစုထဲရောက်ဖို့ခက်တယ်။ ငယ်ကတည်းက စာမဖတ်လာတဲ့ လူတစ်ယောက်ကို ရသစာပေရဲ့ လှပမှု၊ လေးနက်မှုဆိုတာတွေကို နားလည်အောင် မသင်ပေးနိုင်တော့ဘူး။ တက္ကသိုလ်ဘုန်းနိုင်တို့ခေတ်ကလို သောင်းနဲ့ချီရိုက်ရတာ မရှိတော့ဘူး။ အဲဒီခေတ်ကလူတွေလောက်ကို အခုလူတွေ စာမဖတ်ကြတော့ဘူး။ အဲဒီခေတ်မှာက စာအုပ်တွေနဲ့ ယှဉ်ပြိုင်ထိုးသတ်မဲ့ ကိုရီးယားကားတွေနဲ့ တီဗီဂိမ်းတွေ မရှိသေးတာလည်းပါနိုင်တယ်။ အခုခေတ် ကလေးတွေရဲ့မိဘတွေထဲမှာကို စာဖတ်ပြီး ကြီးလာတဲ့ လူကြီးတွေဆိုတာ သိပ်ကိုနည်းသွားပြီ။ ကလေးတွေကို စာဖတ်ပါလို့ပြောရုံလောက် မဟုတ်ဘဲ၊ ကလေးတွေကို သူတို့အရွယ်နဲ့လိုက်လျောညီထွေ ဖတ်စရာလေးတွေ ရှိနေတဲ့နေရာမျိုး အသေအချာရှိအောင် လုပ်သင့်တယ်။ မြန်မာပြည်မှာ စာရေးနေတဲ့သူတွေ အနေနဲ့လည်း ကလေးတွေ စာကောင်းပေကောင်း ဖတ်နိုင်အောင် ကလေးစာပေတွေလည်း များများရေးသင့်တယ်။ ဘာသာပြန်စရာတွေလည်း အများကြီးရှိသေးတယ်။ အဲဒါတွေဟာ မြန်မာကလေးတွေ လိုအပ်နေတဲ့ gap တွေပဲ။ ကလေးတွေကို International Schools တွေမှာမထားနိုင်ရုံနဲ့ International အဆင့်မီတဲ့ အရည်အချင်းမျိုးမရနိုင်တော့ဘူးလို့ မတွေးဘဲ သူတို့ကို ကိုယ်ပေးနိုင်သလောက် အကောင်းဆုံး ပေးမယ်ဆိုပြီး တတ်နိုင်သမျှကြိုးစားသင့်တယ်။
စာအုပ်တွေကို ဖြစ်နိုင်ရင် Apple Store မှာ Games တွေ 99 ပြားနဲ့ရောင်းတာမျိုးရှိစေချင်တယ်။ i-book မှာ တခါတည်းရောင်းရင်လည်းမဆိုးဘူး။ Kindle အတွက်လည်း ထုတ်သင့်တာပေါ့။ မြန်မာတွေဟာ ဘာမဆို အကင်းပါးတဲ့လူမျိုးတွေပါ။ ရှေးကတည်းက မြန်မာလူမျိုးတွေဟာ အရှေ့တောင်အာရှမှာတော့ ခပ်ထုံထုံမဟုတ်ခဲ့ပါဘူး။ လေ့လာမှုကောင်းသလို တီထွင်ဥာဏ်လည်းကောင်းခဲ့ကြပါတယ်။ မြန်မာပြည်တွင်း ဈေးကွက်တင်မဟုတ်ဘဲ ပြည်ပမှာရှိတဲ့ မြန်မာလူမျိုးတွေရဲ့ ဈေးကွက်ကိုပါကြည့်ပြီး ထုတ်ဝေဖြန့်ချိမှုတွေပြုလုပ်သင့်တယ်။ နိုင်ငံခြားမှာမွေးတဲ့ မြန်မာလူမျိုးတွေရဲ့စိတ်ထဲမှာ ငါတို့နိုင်ငံဟာ ခပ်ညံ့ညံ့မဟုတ်ဘူးဆိုတာမျိုး ခံစားနိုင်ဖို့ သူတို့တွေရဲ့ လက်လှမ်းမီတဲ့နေရာမှာ မြန်မာစာအုပ်တွေ E-books အနေနဲ့ဖြစ်ဖြစ် printed ပဲဖြစ်ဖြစ်ရှိနေသင့်တယ်။ မြန်မာစာတွေ သေချာမဖတ်ဖူးတဲ့ မြန်မာလေးတွေကတော့ ကိုယ့်လူမျိုးကို အထင်သေးနေနိုင်ပါတယ်။ သူတို့တွေ သိစရာလိုတာတွေ သိဖို့ မြန်မာစာပေရဲ့ လက်တံတွေ ဒီထက်ရှည်လျားဖို့လိုပါတယ်။ International ISBN No. တွေ သုံးဖို့လည်း ကြိုးစားသင့်နေပါပြီ။ pdf ဆိုရင်လည်း စေတနာရှေ့ထားပြီး လုပ်ကြတယ်ဆိုတာ သိပေမယ့် အနည်းဆုံး Ethics လေးနဲ့စာအုပ်အသစ်တွေကို ချက်ချင်းမလုပ်ပစ်ဖို့လိုပါတယ်။ စာရေးသူတွေအတွက်လည်း ကိုယ်ချင်းစာစဉ်းစားပြီး လုပ်ပေးနိုင်ရင်ကောင်းပါတယ်။ ကျွန်တော်တို့ ဒီမှာ E-books ၀ယ်တယ်ဆိုရင် Technical စာအုပ်တွေမှာ E-books တွေဟာ စာအုပ်ဈေးထက်ဝက်မက ပေးပြီးဝယ်ရပါတယ်။ စာအုပ်က ရတဲ့ဝင်ငွေနဲ့ရပ်တည်နေတဲ့သူတွေအတွက်တော့ စာအုပ်တွေမရောင်းရရင် အနုပညာဆက်လုပ်ဖို့ မလွယ်ပါဘူး။ ၀ါသနာအရရေးနေကြပေမယ့် တခြားလုပ်ငန်းတွေ လုပ်ရတဲ့အတွက် စာအုပ်ကောင်းတွေ များများထွက်မလာတော့ပါဘူး။ နောက်ဆုံးတော့ အခု ကျွန်တော်တို့ ခံစားတွေ့ကြုံနေရတဲ့ စာအုပ်ကောင်းရှားပါးမှုပြဿနာတွေဟာ ကျွန်တော်တို့နဲ့ တိုက်ရိုက်ပတ်သက်နေတော့တာပါပဲ။ (ကမ္ဘာပြားပြီဖတ်တုန်းကတည်း ငါတို့နိုင်ငံဟာ အပြားကမ္ဘာမှာ ကုန်ကြမ်းရောင်းရုံနဲ့တော့ တယ်မနိပ်သေးပါဘူးလို့တွေးမိတယ်။ ပိုပြီး တန်ဖိုးရှိတာတွေရောင်းကြည့်သင့်တယ်။ မြန်မာ့အနုပညာဟာ ဘာသာစကား အဟန့်အတားကို ချိုးဖျက်ပြီး နိုင်ငံတကာ ၀င်ဆန့်အောင်ကြိုးစားသင့်တယ်။)
ဒီပို့စ်မှာ စဉ်းစားစရာ အစလေးတွေကို ကျွန်တော် နည်းနည်းလောက်စီပဲ ထုတ်ခဲ့ပါတယ်။ ဆက်လက်ပြီး စဉ်းစားစေချင်ပါတယ်။ ကျွန်တော့်ပို့စ်ကို Monday မှာ လေးလေးပင်ပင် Monday ကျက်သရေ ဖြစ်အောင်လုပ်ပြီး တမင်တင်လိုက်တာတော့မဟုတ်ပါဘူး။ (ကျက်သရေ ဆိုတာပဲပြောရင် ကျက်သရေရှိ တာလား၊ ကျက်သရေတုံး တာလား မကွဲပြားပါဘူး။ လေသံလေးကပဲစကားပြောတာပါ။ သူငယ်ချင်းတွေ မနက်စောစောစီးစီး မဟားတရား လေးနက်တာတွေ လာပြောရင် ကျွန်တော်တို့က ဒီကောင် ကတော့ Morning ကျက်သရေပဲ ဆိုပြီး ပြောလေ့ရှိပါတယ်။ အဲဒီလို ကျက်သရေမျိုးဖြစ်သွားမှာစိုးရိမ်ပါတယ်။ Monday ကျက်သရေပို့စ် ဆိုရင်တောင် ပြီးအောင်ဖတ်နိုင်တဲ့လူတွေကို ချီးကျူးရမှာပါပဲ။
Labels: monday ကျက်သရေ, Myanmar books, Simple Thoughts